Admin, Author at Myanmar Globe - Page 10 of 65
လာမည့် မေလ (၉) ရက်နေ့ ( သို့မဟုတ် ) ကမ္ဘာအရေးနဲ့ မြန်မာပြည်အရေး ဘယ်လိုအချိုးအကွေ့တွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြား သိရတော့မယ့်နေ့
လာမည့် မေလ (၉) ရက်နေ့ ( သို့မဟုတ် ) ကမ္ဘာအရေးနဲ့ မြန်မာပြည်အရေး ဘယ်လိုအချိုးအကွေ့တွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြား သိရတော့မယ့်နေ့ အကျိုး-အကြောင်း၊ အဆိုး-အကောင်းတွေကို ကွဲကွဲပြားပြားသိမြင်ရမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေ ဒီလိုခေါင်းစဉ်တပ်လို့ မောင်ရှင်ဟာ ဗေဒင်ဆရာလား.. အကြားအမြင်ရသူလားဆိုပြီး မထင်ကြနဲ့ဦးနော်.. ဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်အမြင်သုံးသပ်တာပါ.. ပထမဆုံးကမ္ဘာ့ရေးရာကိစ္စတွေကတော့ […]
ဂျာမနီရှိ အမေရိကန်စစ်စခန်းတွင် ယူကရိန်းတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေ
ဂျာမနီရှိ အမေရိကန်စစ်စခန်းတွင် ယူကရိန်းတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်စစ်စခန်းများတွင် ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို အမေရိကန်က နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်များ စတင်နေပြီဟု အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ “ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေဟာ တခြားနေရာတွေမှာ ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေ ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ ကနဦး အမြောက်လေ့ကျင့်မှုအပေါ် တည်ဆောက်ထားပြီး မကြာသေးခင်ကမှ ကြေညာထားတဲ့ လုံခြုံရေးအကူအညီ အစီအစဉ်တွေရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ကြေညာထားတဲ့ […]
ကမ္ဘာ့သမိုင်းတစ်လျှောက် မကြုံစဖူး ကြုံတောင့်ကြုံခဲ NATO နျူကလီးယား သုံးနိုင်ငံ ရေငုပ်သင်္ဘောတွေ စုဝေးမှု ဖြစ်ပေါ်နေ
ကမ္ဘာ့သမိုင်းတစ်လျှောက် မကြုံစဖူး ကြုံတောင့်ကြုံခဲ NATO နျူကလီးယား သုံးနိုင်ငံ ရေငုပ်သင်္ဘောတွေ စုဝေးမှု ဖြစ်ပေါ်နေ ယူကရိန်း – ရုရှားရဲ့ စစ်ပွဲအတွင်း ဥရောပမှာ မကြုံစဖူး တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာပဲ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ NATO နျူကလီးယား သုံးနိုင်ငံ ရေငုပ်သင်္ဘောတွေ စုဝေးမှု ဖြစ်ပေါ်လာ။ စကော့တလန်မှာရှိတဲ့ […]
မေလ ၇ ရက် – ၈ ရက်တွေမှာ မြန်မာတပြည်လုံး ဖြစ်လာနိုင်ဘွယ်ရှိသည့် မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်မည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ကြိုတင်ခန့်မှန်း အသိပေးခြင်း
မေလ ၇ ရက် – ၈ ရက်တွေမှာ မြန်မာတပြည်လုံး ဖြစ်လာနိုင်ဘွယ်ရှိသည့် မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်မည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ကြိုတင်ခန့်မှန်း အသိပေးခြင်း မြန်မာတပြည်လုံး ဖြစ်လာနိုင်ဘွယ်ရှိသည့် မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်မည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ကြိုတင်ခန့်မှန်း အသိပေးခြင်း ECMWF က ရတဲ့ နောက်ဆုံး update […]
နှစ်သောင်းတန် ထုတ်မယ့် စကစနဲ့ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတဲ့ ဗဟိုဘဏ် (ကုန်ဈေးနှုန်း ၂ ဆမက တက်ပါပြီ)
နှစ်သောင်းတန် ထုတ်မယ့် စကစနဲ့ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတဲ့ ဗဟိုဘဏ် (ကုန်ဈေးနှုန်း ၂ ဆမက တက်ပါပြီ) စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် လိုအပ်လာသော ဘတ်ဂျက်လိုငွေ နှင့် ဈေးကွက်အတွင်း ကျပ်ငွေ လည် ပတ်စီးဆင်းအကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းရန် စစ်ကောင်စီက ကျပ် နှစ်သောင်းတန် ငွေစက္ကူ ရိုက်ထုတ် ရန် စီစဉ်နေသော […]
တတိယ ကမ္ဘာစစ်အန္တရာယ် အမှန်တစ်ကယ်ရှိလာကြောင်း ရုရှား သတိပေးလိုက်
တတိယ ကမ္ဘာစစ်အန္တရာယ် အမှန်တစ်ကယ်ရှိလာကြောင်း ရုရှား သတိပေးလိုက် အမေရိကန်နှင့် မဟာမိတ်များကြား ယူကရိန်းအတွက် နောက်ထပ် လက်နက်များပေးပို့ရန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မတိုင်မီ ရုရှားက “တတိယကမ္ဘာစစ်၏ အမှန်တကယ် ခြိမ်းခြောက်မှု ရှိလာနေပြီ”ဟုသတိပေးလိုက်သည်။ ရုရှားအစိုးရ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းဌာနနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sergei Lavrov က တတိယကမ္ဘာစစ်အန္တရာယ်မှာ […]
တရုတ် ရုရှား ဗြိတိန် ပြင်သစ်နဲ့ အမေရိကန်တို့ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဗီတိုအာဏာအာဏာသုံးစွဲမှုကို ကန့်သတ်လိုက်ပြီ….
တရုတ် ရုရှား ဗြိတိန် ပြင်သစ်နဲ့ အမေရိကန်တို့ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဗီတိုအာဏာအာဏာသုံးစွဲမှုကို ကန့်သတ်လိုက်ပြီ…. ၂၇/၄/၂၀၂၂ လုံခြုံရေးကောင်စီအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် ၅ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ တရုတ် ရုရှား ဗြိတိန် ပြင်သစ်နဲ့ အမေရိကန် တို့ရဲ့ ဗီတိုအာဏာသုံးစွဲမှုကို ကန့်သတ်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ အဆိုမှုကြမ်းကို လန့်ချက်စတိုင်း နိုင်ငံက […]
တွစ်တာကို ဒေါ်လာ ၄၄ ဘီလီယမ်နဲ့ ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ နာမည်ကျော်သူဠေးကြီး Elon Musk
တွစ်တာကို ဒေါ်လာ ၄၄ ဘီလီယမ်နဲ့ ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ နာမည်ကျော်သူဠေးကြီး Elon Musk Elon Musk ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ ပတ်က တွစ်တာကို ဝယ်ယူဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး အစောပိုင်းမှာ ကုမ္ပဏီက ငြင်းဆန်ခဲ့ပုံရပါတယ်။ အခုတော့ ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ ကုမ္ပဏီက စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီး Musk […]
ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်း တရုတ်က ရုရှားထံမှ ကျောက်မီးသွေးကို မတန်တဆ လျှော့ဈေးဖြင့် ဝယ်ယူ
ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်း တရုတ်က ရုရှားထံမှ ကျောက်မီးသွေးကို မတန်တဆ လျှော့ဈေးဖြင့် ဝယ်ယူ 26-April-2022 ဝယ်သူအလုအယက်ရှာဖွေနေသော ရုရှားကုမ္ပဏီများမှ သွင်းကုန်များကို ဂျပန်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့က တားမြစ်ထားစဉ် တရုတ်က စတီးစက်ရုံများတွင် အသုံးပြုသော ကုတ်မီးသွေးကို ရုရှားက ကမ်းလှမ်းသည့် မတန်တဆ လျှော့ဈေးဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ယူကရိန်းအား ရုရှားကျူးကျော်မှုအပေါ် […]
မေလ ပထမပတ်အတွင်း မုန်တိုင်တစ်လုံးဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီး မိုးဦးလေဦး သတိပြုရန်နှင့် အပူလျော့မိုးတွေလာတော့မည့်ဒေသများကို ဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ ဆရာမလေးစုစုစံ
မေလ ပထမပတ်အတွင်း မုန်တိုင်တစ်လုံးဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီး မိုးဦးလေဦး သတိပြုရန်နှင့် အပူလျော့မိုးတွေလာတော့မည့်ဒေသများကို ဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ ဆရာမလေးစုစုစံ မေလ ပထမပတ်အတွင်း မုန်တိုင်တစ်လုံးဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီး မိုးဦး လေဦး သတိပြုရန်၊ အပူလျော့မိုးတွေလာတော့မည့်ဒေသများ မေလ ပထမပတ်အတွင်း မုန်တိုင်တစ်လုံးဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီး မိုးဦး လေဦး သတိပြုဖို့အတွက် မိုးလေဝသဆရာမလေး စုစုစံမှ ကြိုတင်သတိပေးထုတ်ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ချက်အရ […]